Ngaba Ngaba Abakholelwa KuThixo Ngaba Bayihoxise IKrisimesi okanye bayigubhele?
Ubhiyozelwa kwihlabathi lonke, kodwa ngaba abantu abangakholelwa kuThixo bangaba nxaxheba?
Kukhona ingxoxo phakathi kwabantu abangakholelwa kuThixo ukuba ngaba bamele bawubhiyozele iKrismesi okanye kungekhona. Abanye bakwenza oko kuba "bengaphandle" njengabakholelwa kuThixo. Abanye bakwenza oko ukuze bangalutyeli isikhephe phakathi kwamalungu entsapho enqulo. Abanye bakwenza oko kuba behlala benako kwaye bengathandi ukutshintsha
Abanye baphikisa ukuba kufuneka kuthathelwe indawo yeeholide, kodwa abanye bathi iziholide ezinjalo zifanele zinyanzeliswe ngabakholelwa kuThixo.
Nangona isigqibo somntu ngamnye ongakholelwa kuThixo, kufuneka sizenzele yena, zimbalwa iingongoma zokungakholelwa kuThixo.
I Krismesi yiholide yamaKristu
Ngenkcazelo, iKrisimesi ibhiyozela ukuzalwa kukaYesu, ngokuqinisekileyo yi-Mass Mass. Abaninzi abangakholelwa kuThixo abanakholelwa ukuba uYesu ukhona, kwaye abo bangamthandi njengoThixo. Abakholelwa kuThixo bangamaKristu, ngoko kutheni nxaxheba kwiholide efana neyobuKristu?
Ngaba Ukubhiyozela iKrisimesi Kuqhubekisa Iingcamango NgeMelika?
Phakathi kweengxaki ezibangelwa ngabantu abangakholelwa kuThixo ababhiyozela iKrisimesi, amaKristu akhuthazayo axhomekeke kwingxabano yabo yokuba iMelika ingumhlanga wamaKristu. Iholide yamaKristu eyaziwayo kwaye ebalulekileyo e-Melika, kulula ukuba kubango ukuba kukho into ephathelele ubuKristu obalulekileyo kwiinkcubeko zaseMelika.
Izinto zeKrismesi ZiyiPagan
Nangona iKrisimesi sele ibe yeholide yobuKristu, ezininzi iinkqubo zeKrisimesi zanamhlanje zibuhedeni.
Kodwa abangakholelwa kuThixo abangekho bobuhedeni ngaphezu kokuba bangamaKristu. Abakholelwa kuThixo abancedisi ezinye iinkolelo zamaqaba zobuhedeni, ngoko kutheni kunjalo kunye nalawo ayenzeka ukuba athandwe ngexesha leKrismesi? Akukho nto malunga nobuhedeni bamandulo obuphi na ubuzwe kunokobuKristu.
Kutheni Ungabhiyozeli Amanye AmaHholide?
Ukuba umntu ongakholelwa kuThixo unokumangaliswa ukuba akunakubhiyozela iKrisimesi, kufuneka acinge ukuba kutheni bangabhiyozeli ezinye iiholide zenkolo.
Bambalwa abangakholelwa kuThixo abakwenzayo kwiholide yamaMuslim kaRamadan okanye kwiholide yamaKristu ngoLwesihlanu oMnandi. Kutheni wenze ikhefu kwiKrismesi? Izizathu eziphambili zibonakala zibonakala zenkcubeko: wonke umntu wenza kwaye abaninzi abantu banobomi babo, ngoko kunzima ukutshintsha.
Ngaba ama-Atheists aya kugubha naziphi iiholide?
Xa umbuzo ngokuphathelele ukubhiyozela iKrismesi kuqaliswa, isinyathelo esilandelayo sokuzibuza ukuba ngaba abangakholelwa kuThixo bafanele bhiyozele ezininzi okanye naziphi na iiholide ezigcinwe ngokuqhelekileyo. Abanye abangakholelwa kuThixo bathi iholide enobuntu kufuneka ibe yihlabathi kunye nehlabathi jikelele, ngokulinganayo kubo bonke abantu, kungakhathaliseki ukuba lilifa labo lenkcubeko okanye bahlala phi.
IKrismesi njengeHlolide eliHlangeneyo
Esinye isizathu sokuthi uThixo akakho ukubhiyozela iKrisimesi kukuba uye wenyuka ngokuphindaphindiweyo ngokwexesha. Ukuthintela inxaxheba kuThixo kwiKrisimesi kunceda kusibangela isizathu sokususa kwiintlobo ezahlukahlukeneyo zobuKristu nezihedeni.
Ikusasa lama-Atheists kunye neKrismesi
Ubudlelwane phakathi kwabakholelwa kuThixo kunye neKrismesi namhlanje bunzima. Abanye abangakholelwa kuThixo baya kuqhubeka bhiyozela ngokupheleleyo, abanye baya kubhiyozela kuphela iziqephu, kwaye abanye baya kulikhanyela - ngezinye zezinto ezidala iiholide ezizezinye kunye nabancinci bezona zingakhathazeki naziphi na iiholide.
Ngokude nje ukuba abangakholelwa kuThixo bafuna ukwamukelwa kwaye "baqhelekileyo" eMelika, baya kuphepha ukuzenza izinto eziya kubangela ukuba zikhethwe njengezinye izinto okanye ezingaqhelekanga. Namhlanje akukho nto i-America ngaphezu kokubhiyozela iKrisimesi, ngoko abantu abangakholelwa kuThixo abafuna ukulungelelanisa nabo baya kwenza okungakumbi ngexesha leKrisimesi.
Inyaniso yokuba iKrismesi sele ikhuselekile kakhulu iya kubangela ukuba abaninzi abantu bangakholelwa kuThixo. Ukuba lo suku luhlala luyinxalenye ebalulekileyo yamaKristu, abantu abangakholelwa kuThixo baya kuba novelwano kwiingxabano ezichasene neKrismesi. Iholide ekhethiweyo ilula abantu bemihlaba ukugubha.
Ngaba uThixo wayexoshwe kwiZikolo zikaRhulumente?
Unapologetics: Ukuphikisa i-Apologetics neSarcasm & Humor
Ngaba Inguqulelo YeNkolo?
I-Record Record yamaKristu - Iirejista ze-Sparrow
I-FAQ ye-Copyright FAQ: Ndingenza Ipeyinti Yomfanekiso?
Imibuzo yoMthandazo evela kwiingcwele: Indlela yokuthandaza
Konke Okufuneka Ukwazi NgeSiconic Panic yama-1980
Iintlanzi ezili-10 eziphezulu kakhulu kwi-Stax Records
Iingxowa zeNkathazo zePalente zaseLondon
Biography kaGottlieb Daimler
Amazwi kwiiMboniso - iingxaki kwi-Design Design
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseM Monte Cassino
Iiprogram zeMfundo ezizimeleyo ezixhasa ukuzimela
Biography ka-Enrico Fermi